Claritin-D vs. Zyrtec-D: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri - Zvinodhaka Vs. Shamwari | Chikunguru 2021
Kambani, Info Info Nharaunda, Kambani Dhinda Hutano Dzidzo, Nhau Wellness Nharaunda, Wellness Kambani, Nhau Nhau Checkout Zvinodhaka Vs. Shamwari Dzidzo Yehutano Kambani, Iyo Checkout Nharaunda Hutano Dzidzo, Hutano Hutano Dzidzo, Zvipfuwo
Kuru >> Zvinodhaka Vs. Shamwari >> Claritin-D vs. Zyrtec-D
Kuongorora kwemishonga & misiyano mikuru | Conditions kurapwa | Kubudirira | Inishuwarenzi kufukidza uye mutengo kuenzanisa | Zvimwe zvinokanganisa | Kubatana kwezvinodhaka | Yambiro | MIBVUNZO
Mhuno ine mhino kana kuhotsira kunogona kukurudzira vazhinji vedu kunanga kukhemisi uye kunotora mishonga yekurwisa. Neraki, pane zvakawanda pamusoro pe-the-counter sarudzo dzaunosarudza kubva. Claritin naZyrtec mamwe emazita ezita anozivikanwa, asi iwe waizviziva here kuti pane akati wandei mavhezheni ema meds aya?
Claritin-D uye Zyrtec-D zvese zvine decongestant inonzi pseudoephedrine. Izvi ndizvo zvinomiririrwa naD. Pseudoephedrine inoshanda nekudzvinyirira tsinga dzeropa mumapassage ekuderedza kuzvimba uye kuzara. Pseudoephedrine dzimwe nguva inosanganisirwa nema antihistamines kugadzira mushonga uri nani wezvese kurwisa kwemhino.
sarudzo dzekuzvarwa kwevakadzi vanopfuura makumi matatu nemashanu
Claritin-D uye Zyrtec-D vanogovana zvakafanana, asi zvakare vane misiyano yatichaenda kuno.
Ndeupi mutsauko mukuru pakati paClaritin-D neZyrtec-D?
Claritin-D ndiro zita rechiratidzo remusanganiswa we loratadine uye pseudoephedrine. Loratadine yechipiri-chizvarwa antihistamine inoshandiswa kurapa zvakajairika zviratidzo zvekurwara. Loratadine inokonzeresa kudzikira pane yekutanga-chizvarwa antihistamines, senge Benadryl (diphenhydramine).
Claritin-D inowanikwa mumaawa gumi nemaviri nemaawa makumi maviri nemana. Iyo 12-awa vhezheni yeClaritin-D inogona kutorwa kaviri zuva nezuva uye iine 5 mg ye loratadine uye 120 mg yepseudoephedrine. Iyo 24-awa vhezheni yeClaritin-D inogona kutorwa kamwe zuva nezuva uye iine 10 mg ye loratadine uye 240 mg ye pseudoephedrine.
Zyrtec-D ndiro zita rekusanganiswa kwecetirizine uye pseudoephedrine. Kufanana ne loratadine, cetirizine yechipiri-chizvarwa antihistamine ine mashoma ekudzora mhedzisiro pane yekutanga-chizvarwa antihistamines.
Zyrtec-D inongowanikwa mukuumbwa kwemaawa gumi nemaviri. Zyrtec-D ine 5 mg yecetirizine uye 120 mg yepseudoephedrine, uye inowanzo kutorwa kaviri pazuva.
Claritin-D uye Zyrtec-D haifanire kuvhiringidzwa ne wenguva dzose Claritin uye Zyrtec .
Misiyano mikuru pakati peClaritin-D uye Zyrtec-D
Kirasi yemishonga Antihistamine uye decongestant Antihistamine uye decongestant
Brand / generic chinzvimbo Brand uye generic vhezheni iripo Brand uye generic vhezheni iripo
Chii chinonzi generic zita? Loratadine-Pseudoephedrine Cetirizine-Pseudoephedrine
Ndeapi mafomu (s) ayo mushonga unouya? Hwendefa remuromo Hwendefa remuromo
Ndeipi muyero wakajairwa? Imwe 5 mg-120 mg piritsi kaviri pazuva
Imwe 10 mg-240 mg piritsi kamwe pazuva Imwe 5 mg-120 mg piritsi kaviri pazuva
Yakareba sei iyo yekurapa? Kurapa kwenguva pfupi hakupfuuri mazuva gumi Kurapa kwenguva pfupi hakupfuuri mazuva gumi
Ndiani anowanzoshandisa mushonga? Vakuru nevana vane makore gumi nemaviri zvichikwira Vakuru nevana vane makore gumi nemaviri zvichikwira
Mamiriro ezvinhu akarapwa naClaritin-D uye Zyrtec-D
Claritin-D uye Zyrtec-D vese vanorapa zviratidzo zveanergic rhinitis, kana hay fever. Oral antihistamines anotenderwa kurapa zviratidzo senge inomhanya mhino, kuhotsira, uye kunhuwa, maziso emvura. Iyo yakawedzera decongestantant, pseudoephedrine, muClaritin-D uye Zyrtec-D inoshandiswa kurapa kumisidzana kana kuzara kwemhuno.
Ose ari maviri Claritin-D uye Zyrtec-D anogona kurapa mwaka allergic rhinitis uye isingagumi allergic rhinitis. Kurwara kwemwaka inogona kuputika mukati memamwe mwedzi egore nepo husingaperi hwehombodo hunokanganisa vanhu gore rese. Allergic rhinitis inokonzerwa nekuratidzira kune allergen, senge pet dander kana guruva mites.
Mamiriro Claritin-D Zyrtec-D
Allergic rhinitis Ehe Ehe
Claritin-D kana Zyrtec-D inoshanda zvakanyanya here?
Claritin-D uye Zyrtec-D zvakafanana zvinoshanda pakurapa allergic rhinitis. Nekuti iwo ane pseudoephedrine, Claritin-D uye Zyrtec-D zvinoshanda zvakanyanya pakurapa kuzara kwemhuno pane mafomu avo enguva dzose asina pseudoephedrine.
Zyrtec-D inogona kupa chiratidzo chechiratidzo nekukurumidza kupfuura Claritin-D. Cetirizine inotanga kushanda mukati meawa rimwe uye loratadine inotanga kupa zororo mukati memaawa matatu. Mune imwe kaviri-bofu, kudzidza kwakasarudzika , cetirizine yakawanikwa ichivandudza huwandu hwezviratidzo ne25.4% maringe ne11.2% ine loratadine mune varwere vane mwaka weargic rhinitis. Cetirizine inogona, saka, kuve inoshanda antihistamine kupfuura loratadine. Zvisinei, cetirizine zvingangoita pane loratadine kukonzera kukotsira kana kugadzikana. Loratadine inogona kunge iri sarudzo iri nani kune avo vanoshanda mumabasa uko kuchengetedzeka kwakakosha.
Bvunza chiremba wako kana wemishonga pane yakanyanya kurwara mishonga iwe. Mubatsiri wako wehutano anogona kukurudzira imwe antihistamine, senge Allegra (fexofenadine), zvinoenderana nezviratidzo zvekurwisa uye mamiriro ese.
Kuvhavha uye mutengo kuenzanisa kwaClaritin-D vs. Zyrtec-D
Claritin-D haiwanzo kuvharwa neMedare uye zvirongwa zveinishuwarenzi. Semushonga weOTC, Claritin-D inowanikwa zvakanyanya muma pharmacies. Wepakati mutengo wekutengesa weClaritin-D unogona kudarika madhora makumi mashanu zvichienderana nehuwandu uye simba. Uine kadhi reSingleCare rekudzikisa, unogona kudzikisa mutengo kusvika kumadhora gumi nemasere ebhokisi remakumi mashanu nemashanu emaawa emahwendefa Makadhi ekuderedza anowanikwawo kuClaritin-D mahwendefa emaawa gumi nemaviri.
Zyrtec-D inogona zvakare kuwanikwa kunzvimbo zhinji dzemishonga. Haisi kazhinji yakafukidzwa neMedare uye zvirongwa zveinishuwarenzi. Nezve bhokisi remapiritsi eZyrtec-D, avhareji mutengo wekutengesa uri kutenderera $ 30 kusvika $ 50. Mari iyi inogona kudzikiswa kusvika pamadhora gumi nekadhi reSingleCare kumafamasi anobata
Standard muyero Imwe 5 mg-120 mg piritsi kaviri pazuva (huwandu hwe15)
Imwe 10 mg-240 mg piritsi kamwe pazuva (huwandu hwe30) Imwe 5 mg-120 mg piritsi kaviri pazuva (huwandu hwe24)
Chaizvoizvo Medicare copay Zvinoenderana nehurongwa hweinishuwarenzi Zvinoenderana nehurongwa hweinishuwarenzi
SingleCare mutengo $ 18 $ 10
Zvakajairika mhedzisiro mhedzisiro yaClaritin-D vs. Zyrtec-D
Mhedzisiro inowanzoitika yaClaritin-D uye Zyrtec-D kukotsira kana kurara, dzungu, kuneta, kuputika kweganda, uye kuoma muromo. Iyo pseudoephedrine iri mumishonga iyi inogona zvakare kukonzera mhedzisiro senge kushaya hope, kutya, uye kurovera moyo.
Zvimwe zvakakomba mhedzisiro zvinogona kusanganisira iyo yeergic reaction kune iyo mushonga. Allergic reaction inogona kuitika sekumhanyisa kwakanyanya kana kunetseka kufema. Zvimwe zvakakomba mhedzisiro zvinowanzo kukwidziridzwa nekuda kwekudyidzana kwezvinodhaka. Ona kusangana kweDrug kwaClaritin-D vs. Zyrtec-D kuti uwane rumwe ruzivo.
Pazasi pane muongororwo wezvakajairika mhedzisiro mhedzisiro yaClaritin-D uye Zyrtec-D.
Kukotsira Ehe * Ehe *
Dzungu Ehe * Ehe *
Kutemwa nemusoro Ehe * Kwete -
Kuneta Ehe * Ehe *
Muromo wakaoma Ehe * Ehe *
Kusarara Ehe * Ehe *
Kutya Ehe * Ehe *
Mapundu eganda Ehe * Ehe *
Mwoyo palpitations Ehe * Ehe *
Izvi zvinogona kunge zvisiri runyorwa ruzere rwemhedzisiro mhedzisiro inogona kuitika. Ndokumbira utarise kuna chiremba wako kana mupi wezvehutano kuti udzidze zvimwe. * haina kutaurwa
mishonga yemishonga yemishonga inosiyana zvakanyanya kubva kukhemisi kuenda kupharmasi.
Kwayaka: DailyMed ( Claritin-D ), Zuva Nezuva ( Zyrtec-D )
Kubatana kwezvinodhaka kwaClaritin-D vs. Zyrtec-D
Claritin-D uye Zyrtec-D vanogoverana kudyidzana kwezvinodhaka. Ose madhiragi anogona kubatana nemimwe mishonga inokonzeresa kushungurudzika mhedzisiro senge kurara uye kugadzikana. Claritin-D uye Zyrtec-D kushandiswa kunofanirwa kudzivirirwa kana kuongororwa kana iwe uri kutorawo-chizvarwa chekutanga antihistamines, opioid, mhasuru zvinorerutsa, kana zvimwe zvinodzvinyirira. Kana ichibatanidzwa nechero ipi yeimwe iyi mimwe madhiragi, iyo njodzi yekugadzirisa mhedzisiro inowedzerwa.
Pseudoephedrine muClaritin-D uye Zyrtec-D inogona zvakare kudyidzana nemamwe madhiragi. Claritin-D uye Zyrtec-D haifanire kutorwa paine monoamine oxidase (MAO) inhibitor kana mukati memazuva gumi nemana ekumisa MAO inhibitor. Zvikasadaro, kune njodzi yakawedzera yeiyo yakakwira BP. Pseudoephedrine ine inokonzeresa mhedzisiro pane yepakati tsinga system iyo inogona kudzora mhedzisiro yeropa BP mishonga (antihypertensives).
Zvinodhaka Kirasi yemishonga Claritin-D Zyrtec-D
Meclizine Chekutanga-chizvarwa antihistamines Ehe Ehe
Oxycodone Opioid Ehe Ehe
Cyclobenzaprine Tsandanyama dzinozorodza Ehe Ehe
Clomipramine Tricyclic antidepressants Ehe Ehe
Phenelzine MAO inhibitors Ehe Ehe
Chlorthalidone Antihypertensives Ehe Ehe
Bvunza nyanzvi yezvehutano kune kumwe kudyidzana kwezvinodhaka.
Yambiro dzaClaritin-D uye Zyrtec-D
Claritin-D uye Zyrtec-D zvinogona kukonzera kukotsira uye nekuchinja kungwarira kwepfungwa. Antihistamine kushandiswa kunofanirwa kuve kunodzivirirwa uchityaira kana kushandisa michina.
Allergic reaction kune zvigadzirwa muClaritin-D kana Zyrtec-D zvinogoneka. Tsvaga kurapwa nekukurumidza kana ukasangana nekukasira kwakanyanya kana kunetseka kufema.
Claritin-D uye Zyrtec-D inofanira kushandiswa nekuchenjerera kana uine nhoroondo yehosha yemoyo kana matambudziko emwoyo. Pseudoephedrine ndeye CNS inosimudzira iyo inogona kuwedzera kuwedzera kweropa uye kukonzeresa kurova kwemoyo. Izvi zvinogona kuwedzera njodzi yezviitiko zvemoyo muvaya vane nhoroondo yekusagadzikana kwemoyo mutinhimira, kurwisa kwemoyo, kana sitiroko.
Iko kushandiswa kweClaritin-D kana Zyrtec-D kungangoda kuongororwa kune avo vane matambudziko echiropa kana eitsvo. Zvinetso zvechiropa kana zveitsvo zvinogona kukanganisa mashandisiro anoita mishonga iyi, kana kugadziriswa, mumuviri uye kutungamira kune yakashata mhedzisiro.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve Claritin-D vs. Zyrtec-D
Chii chinonzi Claritin-D?
Claritin-D inopfuura-the-counter (OTC) antihistamine uye decongestant. Claritin-D ine loratadine uye pseudoephedrine. Zvajairwa kurapa kurwara kwemwaka uye, zvakanyanya kunyanya, zviratidzo zveyeergic rhinitis.
Chii chinonzi Zyrtec-D?
Zyrtec-D ndeye OTC antihistamine uye decongestant FDA inotenderwa kurapwa kwese. Zyrtec-D ine cetirizine uye pseudoephedrine. Iyo inoshandiswa kurapa zviratidzo zveanorgic rhinitis, senge kusemura uye kumhanyisa kwemhino.
Claritin-D uye Zyrtec-D zvakafanana here?
Claritin-D uye Zyrtec-D vane zvakafanana zvinoshandiswa zvinoshandiswa uye zvinoshandiswa. Iwo ane pseudoephedrine, inozivikanwawo se Kushamiswa . Zvisinei, Claritin-D uye Zyrtec-D havana kufanana. Izvo zvine antihistamines dzakasiyana; Claritin-D ine loratadine uye Zyrtec-D ine cetirizine. Claritin-D inouya mumaawa gumi nemaviri nemaawa makumi maviri nemaviri apo Zyrtec-D inongowanikwa mukuumbwa kwemaawa gumi nemaviri.
vakatora hurongwa b ndokuzoita bonde risina kuzvidzivirira zvakare
Claritin-D kana Zyrtec-D iri nani here?
Claritin-D uye Zyrtec-D zvinoshanda pazviratidzo zvekurwisa. Iine yakawedzera decongestant, ese ari maviri mishonga anoshanda ekurapa sinus kumanikidza uye nasal kuzara. Zvimwe zvidzidzo zvinoratidza kuti Zyrtec yakanyanya simba kupfuura Claritin. Nekudaro, Zyrtec inogona kunge iine yakawanda sedative mhedzisiro kupfuura Claritin. Bvunza wako mupi wezvehutano nezve yakanakisa allergy mushonga iwe.
Ndinogona here kushandisa Claritin-D kana Zyrtec-D ndichiri nepamuviri?
Claritin-D uye Zyrtec-D hazviwanzo kukurudzirwa panguva yekuzvitakura. Ivo vaviri vane decongestant inonzi pseudoephedrine iyo inofanirwa kudzivirirwa panguva yekutanga kwetatu. Bvunza mupi wako wezvehutano nezve Allergy kurapwa nzira panguva yepamuviri .
Ndinogona here kushandisa Claritin-D kana Zyrtec-D nedoro?
Kana yakasanganiswa nedoro, Claritin-D uye Zyrtec-D zvinogona kukonzera kukotsira kana kurara. Hazvikurudzirwi inwa doro uchitora antihistamines .
Chii chakaenzana naClaritin-D?
Claritin-D inoshanda zvakafanana kune mamwe ma antihistamine uye mishonga inoderedza mishonga. Mimwe mienzaniso yemimwe mishonga yekurwisa mishonga ine antihistamine uye decongestant inosanganisira Zyrtec-D (cetirizine / pseudoephedrine) uye Allegra-D (fexofenadine / pseudoephedrine).
Zvakaipa here kutora Claritin-D mazuva ese?
Ndichiri wenguva dzose Claritin dzimwe nguva inotorwa kwenguva yakareba, Claritin-D inongokurudzirwa kuti ishandiswe kwenguva pfupi. Pseudoephedrine haina kukurudzirwa kutorwa anopfuura mazuva gumi panguva.
Claritin-D ane chero mhedzisiro here?
Claritin-D inogona kukonzera mimwe mhedzisiro inowanzo kuve yakapfava yoenda yega. Zvakajairika mhedzisiro yemhedzisiro yaClaritin-D kukotsira, dzungu, kuneta, uye kuoma muromo. Claritin-D inogona zvakare kukonzera kutya, kana kushushikana, uye kurova kwemoyo.
Armodafinil vs. modafinil: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Ndeipi nzira yekuzvarwa yakanaka kwazvo mushure memakumi matatu nematatu?
chii temp zvinoreva kuti une fever
zvakanaka here kutora aleve uine nhumbu
inguva yakareba sei iwe yaunogona kushandisa kuronga b mushure
Ndezvipi zviratidzo zvekusagadzikana kwemukaka
chii chinonzi tembiricha inonzi fivha
coconut mafuta ehutachiona hwehutachiona muvarume